အင်္ဂလန်-ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ကစားမယ့် တတိယနေရာလုပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်များ
14 Jul 2018 . 3:24 PM
၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလား တတိယနေရာလုပွဲအဖြစ် အင်္ဂလန်နဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ဟာ အခုည ၈း၃၀ မှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမှာပါ။ ဒီပွဲမတိုင်ခင် ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ထူးခြားချက်တွေကို ပရိသတ်တွေ သိရှိနိုင်အောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် . . .
– အုပ်စုတွင်းမှာ ဘယ်လ်ဂျီယံကို (၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ပွဲမတိုင်ခင် နောက်ဆုံး(၂၁)ပွဲဆုံတွေ့ခဲ့တာမှာ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ တစ်ပွဲသာရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီး (၁၅)ပွဲနိုင်၊ (၅)ပွဲသရေကျခဲ့တယ်။
– ၂၀၀၂ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက တူရကီနဲ့ ဘရာဇီးလ်အသင်း အုပ်စုတွင်း၊ တတိယနေရာလုပွဲ နှစ်ကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အင်္ဂလန်နဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံတို့ဟာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတည်းမှာ နှစ်ကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
– ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းဟာ ၁၉၈၆ ကမ္ဘာ့ဖလားတုန်းက တတိယနေရာလုပွဲအဖြစ် ပြင်သစ်နဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ဖူးပြီး (၄-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါတယ်။
– ဘယ်လ်ဂျီယံအသင်းကို ၂၀၁၆၊ စက်တင်ဘာတုန်းက စတင်ကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ နည်းပြမာတီနက်ဇ်ဟာ သူကိုင်တွယ်ခဲ့တဲ့ (၂၆)ပွဲမှာ ရှုံးပွဲ(၂)ပွဲသာရှိခဲ့ပြီး ပထမဆုံး စပိန်နဲ့ပွဲမှာ (၂-၀)ဂိုး၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ်တုန်းက ပြင်သစ်ကို(၁-၀)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။
– အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားအုပ်စုနှစ်ပွဲမှာ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု (၁၅)ကြိမ် (တူနီးရှား-၈ ကြိမ်၊ ပနားမား-၇ကြိမ်)အထိရှိခဲ့ပေမယ့် အဲဒီနောက်ပိုင်း(၄)ပွဲမှာ ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုက စုစုပေါင်း(၈)ကြိမ်သာရှိခဲ့တာကြောင့် တစ်ပွဲကို ပျမ်းမျှ(၂)ကြိမ်စီပဲရှိခဲ့တာပါ။
– အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ တတိယနေရာလုပွဲအဖြစ် အီတလီနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ပြီး (၂-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်။
– ဘယ်လ်ဂျီယံတိုက်စစ်မှူး လူကာကူ Lukaku ဟာ နည်းပြမာတီနက်ဇ်လက်ထက် (၂၃)ပွဲမှာ (၂၃)ဂိုးအထိ သွင်းယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံး(၃)ပွဲဆက် ဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် မာတီနက်ဇ်အသင်းကို ကိုင်တွယ်စဉ်ကစပြီး လက်ရှိအချိန် လူကာကူဂိုးမသွင်းနိုင်တာက (၄)ပွဲရှိခဲ့ပါပြီ။
– အင်္ဂလန်အသင်းတိုက်စစ်မှူး ဟာရီကိန်း Harry Kane ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားနောက်ဆုံး(၃)ပွဲမှာ ဂိုးပေါက်တည့်မှုက တစ်ကြိမ်သာရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါကလည်း ကိုလံဘီယာနဲ့ပွဲတုန်းက ပယ်နယ်တီကန်သွင်းတဲ့တစ်ကြိမ်သာဖြစ်ပြီး ဂိုးပေါက်တည့်မှုမရှိတာက (၄)နာရီ (၃၃)မိနစ်အထိ ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
– ခရိုအေးရှားကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာက အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပွဲ(၁၀၀)မြောက် ရှုံးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ နောက်ဆုံးရှုံးပွဲ(၆)ပွဲက အဓိကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတွေမှာ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ (၅)ကြိမ်၊ ယူရိုမှာ (၁)ကြိမ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။
Photo:Fox Sports,japantimes,thenational,The Sun
အင်ျဂလနျ-ဘယျလျဂြီယံတို့ကစားမယျ့ တတိယနရောလုပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြမြား
၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလား တတိယနရောလုပှဲအဖွဈ အင်ျဂလနျနဲ့ဘယျလျဂြီယံတို့ဟာ အခုည ၈း၃၀ မှာ ယှဉျပွိုငျကစားကွမှာပါ။ ဒီပှဲမတိုငျခငျ ပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ ထူးခွားခကျြတှကေို ပရိသတျတှေ သိရှိနိုငျအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ . . .
– အုပျစုတှငျးမှာ ဘယျလျဂြီယံကို (၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ပှဲမတိုငျခငျ နောကျဆုံး(၂၁)ပှဲဆုံတှခေဲ့တာမှာ အင်ျဂလနျအသငျးဟာ တဈပှဲသာရှုံးနိမျ့ခဲ့ပွီး (၁၅)ပှဲနိုငျ၊ (၅)ပှဲသရကေခြဲ့တယျ။
– ၂၀၀၂ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတုနျးက တူရကီနဲ့ ဘရာဇီးလျအသငျး အုပျစုတှငျး၊ တတိယနရောလုပှဲ နှဈကွိမျဆုံတှခေဲ့ပွီးနောကျပိုငျး အင်ျဂလနျနဲ့ဘယျလျဂြီယံတို့ဟာ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ ပွိုငျပှဲတဈခုတညျးမှာ နှဈကွိမျဆုံတှခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
– ဘယျလျဂြီယံအသငျးဟာ ၁၉၈၆ ကမ်ဘာ့ဖလားတုနျးက တတိယနရောလုပှဲအဖွဈ ပွငျသဈနဲ့ဆုံတှခေဲ့ဖူးပွီး (၄-၂)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့ပါတယျ။
– ဘယျလျဂြီယံအသငျးကို ၂၀၁၆၊ စကျတငျဘာတုနျးက စတငျကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ နညျးပွမာတီနကျဇျဟာ သူကိုငျတှယျခဲ့တဲ့ (၂၆)ပှဲမှာ ရှုံးပှဲ(၂)ပှဲသာရှိခဲ့ပွီး ပထမဆုံး စပိနျနဲ့ပှဲမှာ (၂-ဝ)ဂိုး၊ ပွီးခဲ့တဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျတုနျးက ပွငျသဈကို(၁-ဝ)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါ။
– အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားအုပျစုနှဈပှဲမှာ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှု (၁၅)ကွိမျ (တူနီးရှား-၈ ကွိမျ၊ ပနားမား-၇ကွိမျ)အထိရှိခဲ့ပမေယျ့ အဲဒီနောကျပိုငျး(၄)ပှဲမှာ ဂိုးပေါကျကနျသှငျးမှုက စုစုပေါငျး(၈)ကွိမျသာရှိခဲ့တာကွောငျ့ တဈပှဲကို ပမျြးမြှ(၂)ကွိမျစီပဲရှိခဲ့တာပါ။
– အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ တတိယနရောလုပှဲအဖွဈ အီတလီနဲ့ဆုံတှခေဲ့ပွီး (၂-၁)ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တယျ။
– ဘယျလျဂြီယံတိုကျစဈမှူး လူကာကူ Lukaku ဟာ နညျးပွမာတီနကျဇျလကျထကျ (၂၃)ပှဲမှာ (၂၃)ဂိုးအထိ သှငျးယူခဲ့တယျ။ ဒါပမေဲ့ နောကျဆုံး(၃)ပှဲဆကျ ဂိုးမသှငျးနိုငျခဲ့တဲ့အပွငျ မာတီနကျဇျအသငျးကို ကိုငျတှယျစဉျကစပွီး လကျရှိအခြိနျ လူကာကူဂိုးမသှငျးနိုငျတာက (၄)ပှဲရှိခဲ့ပါပွီ။
– အင်ျဂလနျအသငျးတိုကျစဈမှူး ဟာရီကိနျး Harry Kane ဟာ ကမ်ဘာ့ဖလားနောကျဆုံး(၃)ပှဲမှာ ဂိုးပေါကျတညျ့မှုက တဈကွိမျသာရှိခဲ့တယျ။ အဲဒါကလညျး ကိုလံဘီယာနဲ့ပှဲတုနျးက ပယျနယျတီကနျသှငျးတဲ့တဈကွိမျသာဖွဈပွီး ဂိုးပေါကျတညျ့မှုမရှိတာက (၄)နာရီ (၃၃)မိနဈအထိ ကွာမွငျ့နပွေီဖွဈပါတယျ။
– ခရိုအေးရှားကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာက အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ပှဲ(၁၀၀)မွောကျ ရှုံးပှဲဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ နောကျဆုံးရှုံးပှဲ(၆)ပှဲက အဓိကနိုငျငံတကာပွိုငျပှဲတှမှော ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ (၅)ကွိမျ၊ ယူရိုမှာ (၁)ကွိမျရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါ။